Fikambanan-jiolahy, vonoan’olona feno habibiana…: sesilany ny fanamelohana gadra mandra-pahafaty | NewsMada
Miraradraraka tato ho ato ny fanamelohana higadra an-terivozona mandra-pahafaty,anenjehana ireo voarohirohy noho ny raharaha fikambanan-jiolahy arahina fandrobana sy vonoan’olona feno habibiana. Voampanga roa indray no niharan’izany, omaly, tao amin’nyFitsarana ady heloka bevava, Toamasina.
Hatramin’ny andro ma­romaro, nanombohan’ny fotoam-pitsarana momba ny raharaha ady heloka bevava, ao amin’ny Fitsa­rana Ambony Toama­sina, izay mbola mandeha sy mitohy amin’izao fotoana izao, saika ny sazy faratampony ; gadra an-terivozona mandra-pahafaty no sazy mihatra amin’ireo nahavita heloka bevava, halatra sy fandrobana arahina vonoan’olona feno habibiana. Anisan’ny niharan’izany sazy henjana izany indray, omaly, ireto roa lahy voarohirohy ho tompon’antoka tamin’ny fandrobana narahina vonoan’olona, nahafaty ity mpandraharaha mpivarotra iray, tao amin’ny fokontany Sahavangana, kaominina am­bani­vohitra Ampasima­dinika, disitrikan’ i Brickaville, ny alin’ny 26 hifoha ny 27 septambra, ny taona 2018. Talata Fernand sy Ndrianasolo na Rakoto no anaran’ireto nahavanon-doza, niakatra fitsarana, omaly, ireto.
Efa niaiky, saingy nivadi-dela indray…
Tsy vitan’ny nodarohin’izy ireo tamin’ny hazo sy vodibasy ilay mpandraharaha notafihin’izy roa lahy ireo fa mbola narahiny tomboka antsy ary dia maty tsy tra-drano. Rehefa izany, norobain’izy ireo ny entana sarobidy maro tao amin’ity niharam-boina. Anisan’izany, ny firavaka volamena. Mbola noteren-dry zalahy sy norahonany ihany koa ny vadin’ilay mpandraharaha hanome ny vola sy ny entam-barotra rehetra tao an-trano, izay nitotaly hatrany amin’ny 7 tapitrisa Ar.
Marihina fa nandritra ny famotorana nataon’ny zandary nandray ny raharaha tamin’ny voalohany sy teo anatrehan’ny mpitsara mpanao famotorana dia efa niaiky ny heloka vitany izy roa lahy ireto. Omaly anefa, nandritra ny fifandaharana teo amin’ny mpitsara, nolavin’izy roa lahy indray ireo fiampangana rehetra nanenjehana azy. Tao­rian’ny nisintonan’ny fitsarana izay naharitra ora vitsivitsy, nilatsaka ny didy ary izao izy ireo voaheloka higadra mandra-pahafaty izao, miampy fandraràna tsy mahazo mandia faritany. “Fikam­banan-jiolahy mitam-piadiana entina handroba fananan’ olona an-keriny sy vonoan’olona niniana natao sy feno habibiana”, ireo no vesatra niampangana azy roa lahy. Noafahan’ny fitsarana madiodio noho ny fisalasalana kosa ireo olona roa hafa voarohirohy tamin’ity raharaha ity.